CarPlay macruufka ama sida loo helo CarPlay dhammaan baabuurta | Wararka IPhone
CarPlay shaki la'aan wuxuu ahaa mid kamid ah halyeeyada waawayn ee Apple sanadkii lasoo dhaafay, laakiin waxaa jira dhibaato, laqabsasho. Shaki la'aan CarPlay waa nidaam aan loo fidin dadweynaha, shirkadaha soo saara gawaarida caalamiga ah waxay doorbidaan inay ku daraan nidaamyadooda hawlgalka shaashadaha yar yar ee baabuurta ku badan, iyo xitaa noocyada iska soo dhigay dhinaca CarPlay waxay sii wadaan iyagoo aan ku khamaarin oo ku saabsan nidaamka ay Apple ugu talagashay inay nolosha gaariga ka dhigto mid aad u fudud oo la jaanqaadeysa qalabka iDevices-ka.
Si kastaba ha noqotee, iyo markale ayaan u mahadcelinayaa Jailbrak, Waxaan ubaahanahay oo kaliya qalab multimedia ah gaarigayaga noo ogolaanaya inaan baahino dhamaan codadka iDevice, Taageero wanaagsan oo loogu talagalay in lagu dhejiyo shaashadda qalabka si fiicanna loo dhigo CarPlay macruufka tweak oo lagu rakibay si ay ugu raaxaystaan ​​faa'iidooyinka haysashada nidaamkan is-dhexgalka ah ee aadka u yar iyo kan layaabka leh ee gacantayada ku jira ayaa na keenaya.
Farsamaynta waxaa loo yaqaan 'CarPlay iOS' waxayna na siin doontaa fursad aan ku haysano CarPlay iyadoon loo baahnayn in la iibsado mid ka mid ah baabuurta yar ee suuqa ku jirta ee laga heli karo nidaamka hawlgalka.. Isbadal hore oo la mid ah ayaa laga heli karaa keydka BigBoss ee bilaashka ah, in kasta oo nooca la falanqeeyay uu yahay mid ka mid ah betasyadii hore ee lagu helay bixinta rukhsadaha, mid kasta oo ka mid ah qorshayaasha la heli karo isla markaana ballan qaadaya inuu nidaamku ka dhigayo mid run ahaantii farxad u ah dadka isticmaala, leh dheecaan, adeegsi joogto ah oo la taaban karo, sidaa darteed waxay noqon kartaa wehelkeena safarka markasta oo aan fuulno gaariga.
Tilmaamkani wuxuu leeyahay koronto aan dhammaad lahayn, waxaad u maleyneysaa inaanan u isticmaali karin oo keliya GPS-Navigator, haddii aan haysanno taageero iyo iPhone 6 ama iPhone 6+ oo aan aaladda ku dhejinno meel wanaagsan, waxaan haysan doonnaa biraawsar joogto ah, interface fudud oo la isticmaali karo Waxay kuu ogolaaneysaa inaad indhahaaga ku hayso wadada, iyo tan ugu muhiimsan, waxaad awoodi doontaa inaad maareyso muusikada gaarigaaga oo aad isticmaasho fursadaha Siri iyo sidoo kale inaad aqriso oo aad ka jawaabto ogeysiisyada iyada oo loo marayo .
1 interface ka
2 Liiska goobaha
3 Codsiga Khariidadaha iyo xakamaynta dheeraadka ah
Aad iyo aad u fudud, aad u faa'iido badan. Nidaamyada astaamahan, shaki la'aan, waxa ugu muhiimsani waa inaan lumin aragtida wadada, iyo tweak-ka ayaa noo oggolaanaya inaan sidaa yeelno. Iskuxirku wuxuu diiradda saarayaa waxa muhiimka ah, Barxad yar oo wata astaamaha codsiyada aan kula tacaali karno cabbir aad u weyn iyo dhinac dhinaca koontaroolada ah oo aan ku yeelan doonno badhanka "guriga" xagga hoose si aan u awoodno inaan u yeerno Siri ama ka bax barnaamijka guga
Intaa waxaa dheer, baarka dhinaceeda waxaa la socda min kor ilaa hoose tilmaame jawiga ka hooseeya saacadda. Ugu dambeyntiina iyo bartamaha waxaan ku lahaan doonnaa xaalad xaalad ah isku xirnaanta firfircoon xilligaas.
Daacadnimo, waxay keeneysaa ikhtiyaarrada saxda ah ee lagama maarmaanka ah, waxay sameyn doonaan CarPlay macruuf shaki la'aan shirkad ay ku xisaabtamayso safaradayada baabuurkeena fudeydkiisa iyo qaabeynta.
Waqtiga dhaqaajinta: Dhinacyada, sidaan soo sheegnay, macluumaadka ayaa lagu soo bandhigayaa xagga sare, maxaa yeelay qaabkan waxaan go'aan ka gaari karnaa inuu muuqdo iyo in kale, iyo sidoo kale xulashada haddii aan dooneyno in aan ku dhigno darajo centigrade ama fahrenheit.
Muuji xawaaraha hadda jira: Waa fikrad fiican, run ahaantii, runti, waxay ka faa'iideysan doontaa qalabka 'accelerometer' iyo isku xirnaanta GPS si loo go'aamiyo xawaarahayaga, labadaba kiilo mitir saacaddii iyo kiilo mitir saacaddiiba.
Boqolkiiba batteriga: Haddii aan rabno inaan tusno iyo haddii kaleba, marka lagu daro inaan awoodno inaan tusno oo keliya markii ay ka yar tahay 20%.
Quful otomaatig ah marka matoorka gaariga la xiro.
Cusboonaysiinta nooca otomaatiga ah.
Cabirka astaamaha waaweyn, dhexdhexaad ama yar.
Waxaan sidoo kale heli karnaa macluumaadka ku saabsan liisanka aan helnay, shaki la'aan bixinta waa ikhtiyaar weyn, inaad $ 3 tahay hal qalab iyo $ 13 shan qalab.
Codsiga Khariidadaha iyo xakamaynta dheeraadka ah
Waxaa si aad ah loogu dhajiyay qalabka, waxaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa shaashad buuxda waxaanan ku raaxeysan karnaa mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka caadiga ah ee ay na siiso, oo ay ku jiraan isticmaalka illaa Siri. PDhinaca kale, waxaan haynaa kontaroolo taxane ah oo noo oggolaanaya inaan u isticmaalno si dhakhso leh oo fudud, sida:
Badal mugga adigoo garaacaya waqtiga waqtiga laba jeer
Rux aaladda marka ay jirto xaalad deg deg ah (wac deg deg)
Waqtigan xaadirka ah waxaan ku xusuusineynaa in noocani uusan ka jirin Cydia, laakiin kii hore, tan la muujiyay waa beta-kii hore oo aan ku raaxeysan doono toddobaadyada soo socda aaladahayaga Jailbreak. Mahad gaar ah Juan Garrido, la'aantiis (turjubaanka tiknoolajiyada) maqaalkani ma suurtowdeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » CarPlay macruufka ama sida loo helo CarPlay dhammaan baabuurta
Ma heli karo barnaamijka waxaan hayaa ipad mini. Waxay u noqon doontaa nooca.
Waad salaaman tahay, sidee baan u qaban karaa? Ma fahmin qoraalka wax badan, mahadsanid!
Waad salaaman tahay Gustavo, miyaad heshay dhamaadka?
Sida loo adeegsado Facebook Messenger-ka Mac-gaaga arjiga farriimaha